NDINODA KUREGA - 802Quits
Vermonters NDINODA KUREGA
Paunorega fodya zvachose, unotora danho rimwe chete rakakosha kune mabhenefiti sekuita hutano, kuchengetedza mari uye kuchengetedza mhuri yako kuchengeteka. Kunyangwe iwe uchisvuta, shandisa dip, kana kushandisa zvemagetsi fodya (inozivikanwa se e-fodya kana e-fodya), unogona kuwana yakawanda kana shoma rubatsiro pano sezvaunoda. Fodya inopindwa muropa zvakanyanya, uye zvinogona kutora miedzo yakawanda kuti irege kurega zvachose. Uye kuyedza kwese kunoverengeka!
Aya maturusi emahara uye zvirongwa zvekutsigira zvinokupa yakawanda sarudzo yekurega kuputa kana imwe fodya nenzira inokushandira. Mapurogiramu e802Quits, akadai seKusiya Online kana Kurega neFoni (1-800-KUSVIRA-IZVOZU) anosanganisira marongero akagadziriswa ekusiya.
Gadzira Yako Yekurega Kuronga>
Wana Rubatsiro Kurega>
Tora Yako Yemahara Kuregedza Gwara
Kunyangwe iwe waedza kakati wandei, kana uku ndiko kuedza kwako kwekutanga, une zvikonzero zvako zvekuda kurega. Ichi chinongedzo-peji re44 chinokubatsira iwe nhanho-nhanho kuziva kwako zvinokonzeresa, gadzirira matambudziko ako, rongedza rutsigiro, sarudza nezvemishonga uye ugare kurega. Kana iwe uri Vermonter uye uchida kukumbira Kurega Gwaro, ndapota email tobaccovt@vermont.gov kana kurodha Vermont Kurega Gwaro (PDF).